တင်ကျီးဥပန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
နေထိုင်ကျက်စားရာ ဒေသများပြ မြေပုံ
ဥပန်းငှက်သည် တင်ကျီးငှက်မျိုးတွင် ပါဝင်သည်။ ဥပန်းငှက်ကို အန်ဟင်ဂါ မြွေငှက်၊ အမေရိကန် ဥပန်းငှက်၊ ရေကြက်ဆင်ဟု ခေါ်ကြပြီး ရေနေပျော်ငှက် တစ်မျိုးဖြစ်ကာ အမေရိကားတိုက် ပူနွေးသောဒေသများတွင် ကျက်စားနေထိုင်ကြသည်။ အန်ဟင်ဂါဆိုသော စကားလုံးသည် ဘရာဇီးလူမျိုး၊ တူပီဘာသာစကားမှ လာပြီး မကောင်းဆိုးဝါးငှက် (သို့) မြွေငှက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
ဥပန်းငှက်ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပူနွေးသော ရေတိမ်ပိုင်း ဒေသများတွင် တွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ အမေရိကန် ဥပန်းငှက်ကို နေရာဒေသပေါ် မူတည်ပြီး နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ပထမတစ်မျိုးကို တောင်အမေရိကတိုက်၊ အင်န်ဒီးစ် တောင်တန်း အရှေ့ဘက်နှင့် ထရီနီဒတ်ကျွန်း နှင့် တိုဘက်ဂိုကျွန်းများတွင် တွေ့ရှိရပြီး နောက်တစ်မျိုးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ မက္ကဆီကို၊ ကျူးဘားနှင့် ဂရင်နာဒါနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ဥပန်းငှက်၏ အစောဆုံး ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို ဩစတြေးလျတိုက်၌ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဥပန်းငှက်သည် ရေကူးနေစဉ် ရေတွင် မကြာမဏ ငုပ် လေ့ရှိသည်။ နားနေရာမှလည်း ရေထဲသို့ ထိုးချပြီးလျှင် ငုပ်သွားလေ့ရှိသည်။ ရေအောက်တွင် အတော်ကြာသည်အထိ နေလေ့ရှိသည်။ ငုပ်ရာတွင်လည်း ကိုက် ၁ဝဝ မျှအထိ ငုပ်သွားလေသည်။ အစာဖြစ်သော ငါးကို လိုက်ရာတွင် ကိုက်ချီထားသော ငါးကို ဦးခေါင်းဖက်မှစ၍ မျိုနိုင်စေရန် အပေါ်သို့မြှောက်တင်လေ့ရှိသည်။ ဥပန်းငှက်သည် အသိုက်များကို သစ်ပင်များပေါ်တွင် ပြုလုပ်သည်။ မြစ်ကျိုးစိမ့်အတွင်း၌ ဥပန်းငှက် အမြောက်အမြားကို တွေ့ရလေ့ရှိရာ တစ်ခုသောဩဂုတ်လ အတွင်းက သစ်ပင်ခပ်နိမ့်နိမ့်ပေါ်တွင် အသိုက် ပေါင်း ၂ဝဝ ခန့်ကို တွေ့ခဲ့ရဘူးသည်။
ဝီကီမျိုးစိတ်တွင် တင်ကျီးဥပန်းငှက် နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ရှိသည်။
Wikimedia Commons တွင် တင်ကျီးဥပန်းငှက် နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Immature at Bharatpur.
Adults breeding at Uppalapadu, Andhra Pradesh, India.
↑ BirdLife International (2012). "Anhinga melanogaster". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
↑ Mayr, E; G.W.Cottrell, eds. (1979)။ Check-list of birds of the world. Volume 1 (2nd ed.)။ Cambridge, Massachusetts: Museum of Comparative Zoology။ pp. 180–181။
↑ Pennant, T (1790)။ Indian Zoology (2nd ed.)။ London: Henry Hughs။ p. 53။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တင်ကျီးဥပန်း&oldid=709766" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။